အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Thado Thiri - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Thado Thiri
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Thado Thiri ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၈:၂၄၊ ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ (UTC)
Thank you so much for creating new articles by translation. While using ContentTranslation, you don't need to click "publish" (လွှင့်တင်ရန်) button if your translation is uncompleted. ContentTranslation has auto-save feature and everything you translated was saved. Repeatedly published may leads to createanew article if you changed the title during translation (like ဖီချီကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ and ဖီချီပြည်ကို ဘုရားရှင် ချီးမွမ်းမည်။). I would like to suggest you to publish the translated article after you are satisfied with the whole translation. Thank you. Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၅၃၊ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
@Thado Thiri: Please read your messages from Talk page. You created4articles on same topic (ဖီဂျီပြည်ကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ, ဖီချီပြည်ကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ, ဖီချီကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ and ဖီချီပြည်ကို ဘုရားရှင် ချီးမွမ်းမည်။). This is because you do click "Publish" button without checking any warning from ContentTranslation. Please be careful with translated article. Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၅၂၊ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
@Thado Thiri: You did this again and again. (အိုမီယို ဘာဘီနို ကာရို, အို မီယို ဘာဘီနို ကာရို ၊အီတလီတေးသွား။, အို မီယို ဘာဘီနို ကာရို). If you continue do like this again, you may be blocked from editing. Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၃၃၊ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
ဗြိတိသျှတို့၏ အမေရိကတိုက်ကြီးများအား ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်း အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
မင်္ဂလာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဤသည်မှာ သင်ဖန်တီးလိုက်သော ဗြိတိသျှတို့၏ အမေရိကတိုက်ကြီးများအား ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်း စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားခြင်းအတွက် အသိပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A3 အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါး သည် အကြောင်းအရာ မပါရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြင်ပလင့်ခ်များ၊ ကဏ္ဍထည့်သွင်းခြင်းများ၊ "အခြားကြည့်ရန်" အပိုင်း၊ ခေါင်းစဉ်အား ပြန်လည် ရေးသားထားခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အုပ်စုအဖွဲ့တစ်ခုအား ခေါင်းစဉ်အရ ရည်ညွှန်းထားလိုခြင်း၊ အကူအညီ တွင် မေးမြန်းရမည့် မေးခွန်းများ၊ အပြန်အလှန် စကားပြောခန်းများ၊ တမ်းပလိတ် tag များ၊ နှင့်/သို့ ပုံများ သာလျှင် ပါဝင်သော ဆောင်းပါးတစ်ခု ဖြစ်နေခြင်း အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတိုများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Wikipedia:Stub ကို ကြည့်ရှုပါ။ ဆောင်းပါးများ၏ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားအရေးပါမှုရှိရမည် ဖြစ်ပြီး စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ခိုင်လုံသော အကိုးအကားများ ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Shin Khant Maung (ဆွေးနွေး) ၀၄:၃၆၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Thado_Thiri&oldid=511811" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။